उत्कृष्ट नायक नायिकाको अवार्ड अनमोल र बेनिशा लाई, लीलीबिली सर्वाधिक अवार्ड पाउने फिल्म बन्यो - PUBLICAAWAJ
उत्कृष्ट नायक नायिकाको अवार्ड अनमोल र बेनिशा लाई, लीलीबिली सर्वाधिक अवार्ड पाउने फिल्म बन्यो
प्रकाशित : सोमबार, मङि्सर १७, २०७५१४:०७ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौं |अनमोल केसी र बेनिशा हमालले कामाना मासिकको अयोजनामा भएको फिल्म अवार्ड्स २०७५ बाट उत्कृष्ट नायक नायिकाको अवार्ड चुम्न सफल भएका छन् । केसी ले कृ र हमालले ब्लाइन्ड रक्सबाट अवार्ड पाएका हुन् । फिल्म आवाडमा २६ प्रतिस्पर्धात्मक सहित ३४ विधामा अवार्ड प्रदान गरीएको थियो ।
१० विधाको मनोनयन परेको चलचित्र लीलीबिलीले सर्वाधिक ५ विधामा अवाड पाउने फिल्म बन्यो । लीलीबिलीले सर्वोत्कृष्ट चलचित्र, निर्देशक, नवअभिनेत्री, पाश्र्व संगीत र ध्वनि मिश्रण गरी ५ विधामा आफ्नो हातमा अवार्ड पार्न सफल भएको हो । कृ ,घामपानी र शत्रुगते ले ३ ३ वटा अवार्ड हात पार्न सफल भए ।
दुई रुपियाँबाट कविराज गहतराजले नृत्य निर्देशकको अवार्ड आफ्नो हात पार्न सफल भए । छक्का पञ्जा २ बाट वर्षा राउत सर्वोत्कृष्ट सह–अभिनेत्री ,चलचित्र ग्याङ््स्टार ब्लुजबाट आशिरमान देशराज जोशी नवअभिनेताको अवर्ड चुमे भने भुइँमान्छेले जुरी अवाड आफ्नो हात पार्यो ।
स्पेसल मेन्सन अवार्डबाट अभिनेताद्वय सुनिल थापा र रमेश बुढाथोकी पुरस्कृत भए । अनु श्रेष्ठ लाई फेसनतर्पm ,कालीप्रसाद बास्कोटा लाई संगीततर्फ र वीरेन्द्र हमाललाइ रगंमञ्चतफको क्रिटिक्स अवार्ड प्रदान गरियो । समारोहको कार्यक्रमको आकर्षक पक्षका रुपमा सरोज खनाल , गौरी मल्ल , प्रदीप खड्का तथा केकी अधिकारीको रोमाञ्चक प्रस्तुति रह्यो ।
दिपकराज गिरीको कटाक्ष : सलमान र कपिललाई सुरक्षा दिन नसक्नेले पूरै बलिउडलाई कसरी सुरक्षा दिने पान्डेजी ?
नेपालमा नेहाको साँझ !
गायक राजु लामा सहित २७ जनाको आरोही टोली सफलता पुर्बक सगरमाथा चुचुरोमा